Talo & Tricks u syncing iPhone la 2 Kombiyuutaro
> Resource > iPhone > Sida loo hagaagsan iPhone 2 Kombiyuutaro oo aan laga badinin Data
"Sidee ayaan u hagaagsan karaa iPhone 2 kombiyuutarada? Waxaan uun helay cusub HP EliteBook oo aan doonayo in aan u hagaagsan aan iPhone 4s laakiin ma ii sii dayn doonaa. Ama way ka fogayn doontaa dhammaan macluumaadka kale ee aan ku iPhone. Ma suuragal ah in ii waxaa u hagaagsan in computer gurigayga iyo my laptop? Waxaan la isticmaalayo iPhone 4s Thanks.! "
Mar kasta oo aad isku daydo inaad u hagaagsan aad iPhone la computer kale oo aan ahayn mid ka mid ah aad waqti walba si hagaagsan oo Lugood isticmaalo, digniin soo bixi doona, kuu sheegaysa in syncing ka masixi doonaa wax walba oo ku saabsan iPhone. Tani waa sida Lugood shaqeeyaa in kastoo aad idman labada kombiyuutarada. Sidaas, waxaan aan u hagaagsan karaa iPhone oo leh labo kombiyuutarada? No, aad awoodo. Apple ma ku siin kasta oo doorasho ku gaadhsiin kara hadafkaaga, laakiin waxa aad ka dhigi kartaa adigoo isticmaalaya Wondershare TunesGo (Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) .
Hel version tijaabo ah Wondershare TunesGo (Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) si aad u aragto sida ay u shaqayso.
Fiiro gaar ah: The version Mac ah wax yar ka duwan version Windows. Hadda version Mac ka taageertaa kaliya songs syncing, videos, iyo sawirro, Podcasts, Lugood U, iwm sokow, kuwaas oo, version Windows ka taageertaa xiriirada iyo fariimaha qoraalka ah sidoo kale.
Maxay qalab TunesGo oo kale samayn?
Shaqooyinka qalab TunesGo sida Lugood ah on your computer. Waa qalab desktop ah. Waxaa songs, videos, iyo sawiro, iwm ka your computer si aad iPhone gelin doonaa iyada oo aan tirtiro xogta asalka ah ee aad iPhone. Oo waxaa la yaab leh, waxa aad u ogolaanaya in ay gurmad music, videos, sawiro ka iPhone si aad u computer sidoo kale. Si aad u hagaagsan aad iPhone 2 kombiyuutarada, waa in aad la rakibi TunesGo Wondershare mid ka mid ah kombuyuutarro aad, daynin waxaa u shaqeeya sida Lugood ee kombiyuutarka. Ka dib markii in, aad u hagaagsan kartaa iPhone la mid computer via Lugood ah, hagaagsan oo computer kale la TunesGo.
Sidee u hagaagsan qalab TunesGo iPhone oo leh labo kombiyuutarada?
Waxaad u hagaagsan kartaa iPhone mid ka mid ah computer via Lugood ah aad. Ku rakib Wondershare TunesGo (Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) in computer kale si aad u hagaagsan aad iPhone la computer this. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka la isticmaalayo qalab.
Burcad TunesGo Wondershare iyo xiriiriyaan iPhone la computer via cable USB ah. Ka dibna waxaad arki kartaa iPhone waxaa tusay on dariishaddii TunesGo.
, Tallaabada 2. nidaameed music videos, ama sawiro si iPhone
Dhinaca bidixda ee suuqa kala, waxaad ka arki kartaa Music, Videos, Photos iyo. Riix shay kasta si ay u muujin daaqadaha u dhiganta. Ka dibna waxaad riixi kartaa dar dar files ka your computer si aad iPhone. Taasi waa!
Isku day TunesGo Wondershare si ay u fududahay in aad u hagaagsan iPhone oo leh labo kombiyuutarada!